မြူနှင်းမှုံနေသော ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဝင်ပေါက်ထိပ်နားမှာ ကျနော်တို့စာသင်ခဲ့ကြသော မန္တလေးဆောင်ကြီးက ကျနော်တို့ကိုငဲ့စောင်းပြီး ကြည့်နေသလိုမျိုးပြန်ခံစားနေရပါတယ်…..
ဟိုးအချိန်တုန်းကနုနု နယ်နယ်ဘ၀ အခုတော့ ဘ၀အတွေ့အကြုံရင့်ကျင့်လာတဲ့ဘ၀….. နှစ်တိုင်းသူငယ်ချင်းတွေပြန်ဆုံကြတဲ့ပွဲကို အမြဲတမ်းမျော်လင့်နေခဲ့မိတယ်…..
ဟေ့ …ဟေ့…. စောစောစီးစီး ဟိုမှာ ဆရာတစ်ယောက်လာနေပြီ…….
……ဘယ်သူလဲ…ကျောင်းသားလား…..ဆရာလား……ကြည့်ပါလား….ဒီ…ဒီဇိုင်းက ကျောင်းသားဖြစ်နိုင်မလား…..၀ိုင်းတွဲလိုက်ကြပါအုံး….. လက်ထဲက ဒုတ်ကောက်ကိုထောက်ရင်း ဖြေးဖြေးချင်းလှမ်းလာနေတယ် …… ခဏရပ်ပြီးမန္တလေးဆောင်ဘက်နောက်ပြန်လှည့်ပြီး ကြည့်နေသေးတယ်….ဓမ္မာရုံဝင်ပေါက်က ဖြေးဖြေးချင်းလျှောက်လာစဉ်နှစ်ကြိမ်သုံး ကြိမ်ရပ်နေသေးတယ်….. ကျန်းမားရေးမကောင်းဘူး ထင်တယ်….၀ိုင်းတွဲလိုက်ကြပါအုံး……တဖြေးဖြေးနီးလာပါပြီ……သိုးမွှေးဦးထုပ်ဆောင်းထားသောမျက်နှာကိုကြည့်ရတာမသဲကွဲပါ…..
ငယ်ရုပ်ကိုမှတ်မိသွားပါပြီ…..ဆရာလို့ထင်နေကြတဲ့တောသူကြီး သူ့ဒီဇိုင်းက ဆရာတွေထက်ပိုပြီးရင့်ကျင့်ပုံပေါက်နေတယ်…..
ဟာ…သူကြီး ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ….မင်းကိုကြည့်ရတာ အဖိုးကြီးကျနေတာဘဲ……
ဒီတောသူကြီးကို ဆရာတွေနဲ့ အတူထိုင်ခိုင်းပြီးငါတို့ကန်တော့လိုက်ကြရအောင်…….
တောသူကြီး ကျနော်တို့အားလုံး ကို တရားစဟောပါတော့တယ်….ဘုရားစာတွေလည်းရွတ်ပြနေတယ်…
ဟေ့ကောင်တွေ မင်းတို့ ငါပြောတာနားထောင်ကြရဲ့လား………နားကောလည်ကြရဲ့လား….
မင်း ဒီပုံကို မင်းမိန်းမ ဘာမှမပြောဘူးလား…..
ဒီမိန်းမ ဘာမှမပြောလို့ပေါ့ကွ…ငါနဲ့မလိုက်ဖက်လည်း မလိုက်ဖက်တဲ့အကြောင်းပြောသင့်တာပေါ့။ ဒါကြောင့်မိန်းမကိုစိတ်ကုန်တယ်….
မင်းတို့ပုံတွေကြည့်ရတာဘာသာရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုံမပေါ်ပါဘူး….ဟိုတစ်ကောင်လဲဂျင်းဘောင်းဘီဝတ်တုန်း….ငါတို့ရွာမှာဆို မင်းတော့ တော်တော်အတင်းပြောခံရမှာ……..
ငါတို့သူငယ်ချင်းထဲမှာ ကျော်သူမရှိပါဘူး ….ဘယ်သူလဲ….
ရှိတာမှ ဒီသားတစ်ယောက်ထဲ…… ဒီကောင်ကိုးရီးယားက ခုထိပြန်မလာသေးဘူး…….. သူ့အမေက လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်လောက်က ပြန်လာခိုင်းတယ်……လူမလာဘူး၊ စာဘဲရောက်လာတယ်……
အဖေ ရွာမှာ အင်တာနက်ကဖေးရှိလားလို့မေးလာတယ်…….
မင်းနဲ့ငါ ငယ်ငယ်က သောက်နေကျလ္ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ စူပါကော်ဖီမစ်ရော၊ နက်စ်ကဖီးရော၊တီးမစ်တွေရော အစုံ ရနေပြီလို့ စာပြန်လိုက်တာ…..လူလဲပေါ်မလာ၊စာလဲမပြန်တော့ဘူးကွာ…….
မင်းသူ့အနားကို မကပ်လို့ ဟိုးအဝေးကြီးကသားကိုသတိရနေတာ…….
မင်းသိပ်ပြီးတရားရနေပြီလား……ဒါဆိုလဲကျော်သူကားနဲ့ ရေဝေး ကို go တော့……
ပျော်ပျော်နေ သေခဲတဲ့….စိတ်ပျော်တော့ ကိုယ့်နုတာပေါ့ကွာ…..
မရဘူး….မရဘူး…..ညကျမှ စိတ်ပျို ကိုယ်နုဆေးပေးမယ်…..
ဆရာကန်တော့ပွဲလာကြသောကျောင်းသားများကြားထဲမှာ သူကြီးတစ်ယောက် သူ့ဝတ်စားပုံနဲ့ ရုပ်က
ရင့်သလိုဖြစ်နေတယ်….သူ့ဖြစ်ပုံက ကန်တော့ခံဆရာတွေထက်ရုပ်ရင့်သလိုဖြစ်နေတော့ သူ့ခမျာနဲနဲတော့ ရှက်နေရှာတယ်……
မင်းတို့ကိုကြည့်ရတာ အရမ်းတက်ကြွပြီး ဖျတ်လတ်နေတာဘဲနော်…….
ဒါ ပေါ့…ကိုယ်တို့မှာက ဆေးရှိတယ်လေ….ညကျမှမင်းကိုပေးမှာ…..
နေ့လည်ဆရာကန်တော့ပွဲပြီးသွားတော၊့ လှည်းတန်းမှာသူကြီးအတွက် အ၀တ်အစားသွားထွက်ဝယ်ကြပါတယ်၊ ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ စပို့ရှပ်၊ ဂတုံးပြောင်ကိုစွပ်ဘို့ မန်ချက်စတာဘောလုံးအသင်းသိုးမွေးခေါင်းစွပ်တွေနဲ့သူကြီးပုံနဲနဲပိုလန်းလာပြီ…..
ညစာအတွက် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ အကယ်ဒမီဟိုတယ်မှာသွားစားကြမယ်….. ဒီနေ့ကန်တော့ကြသောသူငယ်ချင်းထဲက တစ်ယောက်ကဟိုတယ်ကိုဦးစီးနေသောကြောင့်သူစီစဉ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်……
အရက်ဆိုတာက မင်းသွားချင်တဲ့နတ်ပြည်မှာမရှိသလို၊မင်းမသွားချင်တဲ့ ငရဲပြည်မှာလည်းမရှိဘူး၊လူ့ပြည်မှာဘဲရှိတာ လူ့ပြည်ရောက်တုန်း ရောက်ခိုက်သောက်ကိုသောက်ရမယ်…..
သူငယ်ချင်းက ကျနော်တို့အတွက်ကာရာအိုကေ ခန်းမကြီးတစ်ခုစီစဉ်ပေးထားတယ်……အပြင်လူတစ်ယောက်မှမရှိ……..
ကျနော်တို့ပျင်းနေမှာစိုးသောကြောင့် စကားပြောဖေါ်ရအောင်ကောင်မလေး အယောက်လေးဆယ် လောက်က စောင့်နေပေးတယ်…..
ရော့ သူကြီး….ဒါကို မိုက်ခရိုဖုန်းလို့ခေါ်တယ်…..
မင်းဘဲ ငါတို့ကိုနေ့လည်က တရားဟောခဲ့တယ်လေ…….နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားလေ…..
ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ခြံရံလျှက် မိုက်ကိုဆွဲပြီး သူကြီး အပြတ်ဟဲနေပြီ…..
လူမွဲများစိတ်ချမ်းသာအောင် ကြံဆောင်မည်ဒို့ နဂါးနီ……..
ဂျင်းဘောင်းဘီ၊ မန်ယူခေါင်းဆောင်းဝတ်ထားတဲ့တောသူကြီး လူငယ်ပုံဖြစ်သွားပြီ။ လက်တစ်ဖက်ကမိုက်လက်တစ်ဖက်ကကောင်မလေး ပခုံးမှာတင်ပြီးသီချင်းဟစ်နေသောပုံက နေ့လည်ကပြောနေသော ဖြစ်ပျက်တရားနဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတွေကိုမေ့နေလောက်ပြီ…
မိုက်ခွက်ကို ကိုင် သီချင်းဟစ်ပြီးသကာလ သူကြီးအာရွင်သွားပြီ….ကောင်မလေးတစ်အုပ်နဲ့စကားတွေဖေါင်ဖွဲ့ လို့ လူငယ်လေးတစ်ယောက် လိုပင်…..တောသူကြီးဆိုသောဂုဏ်ပုဒ်ကိုသူမေ့နေပြီ…..
နေကာမျက်မှန် လေးနဲ့ လေးနှမငယ် ခင်ပါတယ်…….
ငှက်ခါးလေးတွေ အခါခါ နားလို့……..သက်ထားလေးဆီစာလွှာပါးရင်း…..
ဇီးကုန်းရွာကသူကြီးခင်ဗျား……ဟိုတယ်ရှေ့ မှာ ကားစောင့်နေပါတယ်…..
ရုပ်ရှင်မင်းသားကျော်သူက နာရေးကားနဲ့ ရေဝေးလိုက်ပို့မလို့….